Mitantana mora foana ny mpampiasa vola amin'ny CRM Tompony
Amin'ny maha-mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra lehibe amin'ny mpandraharaha am-polony sy efitrano fandraisam-bahiny misy serivisy anao, mety mifampiresaka amin'ny tompona vitsivitsy ianao. Furhtermore, raha mihazakazaka ianao amin'ny fotoana fiasa dia mety manisa an-jatony na an'arivony ny mpampiasa vola.
Ny fitazonana ny anaran'ireo anarana sy ny antsipirian'ny fifandraisan'ny tompony tsirairay avy ary ny fiantohana fa fantatry ny mpiasa izay fananan'izy ireo dia mety ho lasa sarotra rehefa mitombo ny asan'ny fandraisam-bahiny. Ankoatr'izay, ny fitantanana fantsom-pifaneraseran'ny tompona mety dia matetika midika fa tsy maintsy mampiasa rafitra roa ianao Hubspot na takelaka fanoratana fotsiny mba hanarahana ny antsipirian'ny tsirairay.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou Tompon'ny CRM manampy?
ZeevouNy CRM an'ny Tompony voaorina dia mamela anao hitantana mora foana ireo mpampiasa vola rehetra iasanao. Azonao atao ny manara-maso ny mombamomba azy ireo manokana, manome azy ireo log amin'ny Tompon'ny Portal ary araho ny fehezan-dalàna momba ny fifanarahana nataonao tamin'izy ireo rehetra avy amin'ny fidirana tokana.
Ankoatr'izay, ny mombamomba ny tompona dia tsy voatery hampifandraisina a vondrona. Midika izany fa azonao atao ny mampiasa ny Owner CRM hitantana ny fifandraisanao amin'ny mety ho fitarihana izay tsy iarahanao miasa ankehitriny, nefa tsy mila mampiasa fampiharana fampiharana an'ny antoko fahatelo ianao.